Xaflad Caleemasaar oo loo sameeyey Duqa Cusub ee Garoowe Xasan Goodir (Sawirro) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Xaflad Caleemasaar oo loo sameeyey Duqa Cusub ee Garoowe Xasan Goodir (Sawirro)
Xaflad Caleemasaar oo loo sameeyey Duqa Cusub ee Garoowe Xasan Goodir (Sawirro)
Posted: Mohamed Dacar - September 12, 2015 Leave a Comment
Waxaa maanta magalada Garowe ee Caasumadda Puntland lagu qabtay xaflad lagu caleemasaarayay maamulka cusub ee degmada Garoowe isla markaana lagu sagootinayay duqii hore ee degmada Axmed Siciid Geelle “Shoodhe”.
Xafladda oo ka dhacay xarunta cilmi baarista Puntland ee PDRC ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Puntland, wasiirro, xildhibaanno, Isimo, waxgarad, haween, siyaasiyiin, ganacsato iyo bulshada qaybaheeda kala duwan.
Duqii hore degmada Garowe Axmed Siciid Geelle “Shoodhe” ayaa u mahadceliyay maamulka cusub, waxaana uu sheegay in doorashadii dhawaan dhacday ahayd mid u qabsoontay si xalaal iyo xornimo leh.
Shoodhe waxa ku ammaanay bulshada ku nool Garoowe qaabkii wanaagsanaa ee ay ula shaqeeyeen, isagoo xusay inay qaateen baaqii madaxweynaha Puntland ee ahaa Puntland ha isku tashato.
Dowladda Puntland ayuu Shoodhe xusay inay kala shaqeeyeen sidii wax qabad wanaagsan uga sameyn lahaa Casumadda.
Guddoomiyaha cusub ee degmada Garoowe Xassan Maxamed Ciise “Goodir” oo u mahad celiyay dadkii soo qaban qaabiyay xafladda aya sheegay inuu wax ka qaban doono dhinacyada hormarka, Caafimaadka, bilicda iyo waxbarashada.
Degmada Garowe ayuu Goodir tilmaamay in laga bilaabi doono mashaariic lagu hormarinayo oo isug jira Waddooyin iyo Layrar lagu xiro goobaha Mugdiga ah.
Duqa waxa uu sidoo kale sheegay inuu ka shaqayn doono qaabkii qurbo joogtu maalgashi uga sameyn lahaayeen Caasumadda Puntland ee Garowe.
Goobta waxaa sidoo kale ka hadlay masuuliyiin kale oo soo jeediyay in laga wada shaqeeyo sidii loo hormarin lahaa Caasumadda Puntland ee Garoowe.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiim Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ayaa soo dhaweeyay isbadalkii ka dhacay Garowe, waxaana uu xusay inay la shaqayn jireen maamulkii hore haddana ay la shaqayn doonaan.
Duqa Cusub ee Garowe Xassan Maxamed Ciise ayaa dhawaan lagu wareejiyay xilka maamulka degmada Garowe ka dib munasabad lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee degmada Garowe.